Hafanàm-po nomerika · Febroary, 2016 · Global Voices teny Malagasy
Hafanàm-po nomerika · Febroary, 2016
Tantara mikasika ny Hafanàm-po nomerika tamin'ny Febroary, 2016
Makedoniàna Manao Hetsi-panoherana Hiarovana Ny Lalàm-panorenana Amin'ny Fitsaràna Avon'ny Lalàm-panorenana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 29 Febroary 2016
"Raha ny fahitàna azy, dia toa ara-dalàna tanteraka ny fanaovana hosoka amin'ny fifidianana, ary na inona na inona heloka vitanao, rehefa mbola ny fitsaràna no manaiky azy"
Fitsarana Makedoniana Mandà Ny Fandravàna Didy Nangatahan'ny Mpikatroka Ira Voaheloka Noho Ny Fanalàna Baràka Mpanolotra Amin'ny TV Mpomba Ny Fitondràna
Taona dimy taorian'ny nanombohan'ilay raharaha, farany dia nolavin'ny fitsaràna Makedoniana ihany ny fandravàna didy nangatahan'ny mpikatroka iray voaheloka ho nanàla baràka ny mpanolotra fandarahana amin'ny fahitalavitra mpomba ny fitondràna
Azia Afovoany sy Kaokazy 29 Febroary 2016
Tany amin'i Yogoslavia sy ny Firaisana Sovietika teo aloha, "Hatrany amin'ny garabola ka hatrany amin'ny oniversite, taranaka mpianatra sy tanora no nitombo amin'ny fahalalana ny kolikoly avy amin'ny zavatra niainany manokana."
Eoropa Afovoany & Atsinanana 26 Febroary 2016
Raisin'ireo manampahaizana sy ny fitsaràna ho "media ho an'ny daholobe" ireny pejin'ny media sosialy miaty "antso mivantana hanao hetsika" ireny satria misy vahoaka ao, ary tsy azo ferana ny isan'ny olona afaka miditra mijery azy
Nahoana Ny Olona Ety Anaty Aterineto No Miantso An'i John Kerry Ho “Jiolahimboto” ?
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 25 Febroary 2016
Raha nanomboka ny 29 Janoary ny kaonferansa Geneva 3, an'aliny koa ireo bitsika nampiasa ny tenifototra #KerryTheThug (kerry_Jiolahimboto) hanamelohana ny fanehoankevitry ny sekreteram-panjakàna Amerikàna momba an'i Siria.
Eoropa Andrefana 25 Febroary 2016
Hifampizara raikefa ireo media azo atao fanolo avy any Portiogaly sy Espaina satria "tena maika ny hiadiavantsika làlana hifandraisana sy hamokarana ary hampitàna ny torohay/vaovao."
Nampanantena Ny Hetsika Fa Hiverina Indray Hitaky Ny Fitaterana Maimaimpoana Ao São Paulo Amin'ny Faran'ny Volana Febroary
Amerika Latina 24 Febroary 2016
Horaisin'ny fikambanana an-tanana hatrany amin'ny fakany indray ny raharaha miaraka amin'izay mety ho mpiara-miombon'antoka, sy ny handefa araka izay tratra ny fampahafantarana hanomanana fihetsiketsehana lehibe ahafahana manome aina vao indray ny hetsika ataon'izy ireo.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 23 Febroary 2016
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 Febroary 2016
Bilaogy LGBT Iray Naato Fa Niresaka Tobin'Asa An-terivozona Tao Kiobà Nandritra Ny Taompolo 1960
Amerika Latina 21 Febroary 2016
"Nihevitra aho fa olana ara-teknika izany...tsy fantatro hoe nahoana no 'manala-baraka ny Revolisiona izany,' araka ny nambaran'ny didim-pitsarana taminay." hoy ny bilaogy voasivana.